China Easy ufakelo umucu ephothiweyo nokwadala bamboo nokwenziwa kunye Factory | Igolide yoqalo
Ibhodi yokuqamba u-bamboo ine-bamboo entle kakhulu kwaye inike nayiphi na indawo yangaphandle inkangeleko entle. Amacala obude atyhidiwe, kunye ne-joist echanekileyo (inokuba sisinyithi, ukhuni, uqalo) ukuseta, i-REBO decking decking inokufakwa ngokukhawuleza kusetyenziswa iziqwenga zensimbi ezingenasici kunye nezikrufu, elinye icala linokudityaniswa nejoist, elinye icala lokudityaniswa nomgangatho.
I-REBO® isebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo ezizodwa ukuphucula ubulukhuni, uzinzo lobungakanani, ukubuyisela umlilo kunye nokuqina kwinqanaba eliphezulu, kwaye ihlale ingumbala wayo wendalo, ngenkangeleko yendalo yomthi onzima. Ibhodi yokuqamba u-bamboo ine-bamboo entle kakhulu kwaye inike nayiphi na indawo yangaphandle inkangeleko entle. I-bamboo iye yaba yenye yezona zinto zidumileyo zokwakha, ivumela iintlobo ezahlukeneyo zezitayile, imibala kunye neendlela zokusetyenziswa.
I-REBO strand bamboo ephothiweyo yinto ephilayo kwaye ihlala ixesha elide. I-REBO isebenzisa inkqubo eyodwa enelungelo elilodwa lomenzi ukuphucula ubulukhuni, uzinzo, kunye nokuqina komgangatho ophezulu. Ubushushu obugqithisileyo be-220 treatment unyango lobushushu obugqithisileyo lutshintsha i-odolo ye-molucular ye-bamboo fibers, ukuqinisekisa ukungunda, amaqanda eentshulube kunye nezakhamzimba zisuswe kwaye zibonakaliswe nge-super mothproof, anti-corrosion kunye ne-anti-mildew. Isetyenziswa ngokubanzi ekhaya, ihotele, iofisi, isikwere, isitalato, isikolo, villa, njl
Ibhodi yokuqamba u-bamboo ine-bamboo entle kakhulu kwaye inike nayiphi na indawo yangaphandle inkangeleko entle. Amacala obude atyhidiwe, kunye ne-joist echanekileyo (inokuba sisinyithi, ukhuni, uqalo) ukuseta, i-REBO decking decking inokufakwa ngokukhawuleza kusetyenziswa iziqwenga zensimbi ezingenasici kunye nezikrufu, elinye icala linokudityaniswa nejoist, elinye icala lokudityaniswa nomgangatho. Ke ukuhonjiswa kungabanjwa ngokuqinileyo. Le nkqubo igcina ixesha kwaye inciphise iindleko zabasebenzi ukufaka iibhodi zokuhombisa
Egqithileyo Ukuqina okuphezulu kwesilayidi esinganyangekiyo sokuhombisa ngaphandle
Okulandelayo: I-E1 Eurpean standard eco-friendly bamboo flooring ngaphandle
Umgangatho we-Bamboo Deck
I-Bamboo Flooring yangaphandle
Umgangatho weBambo oQinisekileyo
Umgangatho weNdalo yoMthi
Yangaphandle Bamboo nokwadala
Ngaphandle uKhuphiswano amaxabiso Bamboo
Umgangatho wangaphandle weMango Bamboo Charcoal Flooring
Ukulungiswa kwakhona kwe-Bamboo Flooring
Umgangatho oqinileyo weBamboo
Umgangatho oqinileyo wangaphandle weBamboo
Strand womluki Bamboo nokwadala